Kristianina - Wikipedia
Ny Kristiana na Kristianina dia olona manaraka ny fampianarana sy ny fomba araka ny voalazan'ny Baiboly indrindra fa ireo Filazantsara na Evanjely, izay milazalaza momba ny fiainanan'i Jesoa Kristy sy ny fanarahana azy. Ho an'ny Fiangonana kristiana maro dia anisan'ny maha Kristiana ny finoana an'i Jesoa Kristy ho Andriamanitra. Ny mpamari-toetra hoe kristiana na kristianina dia ilazana ny zavatra momba ny finoana kristiana toy ny fiangonana sy ny teolojia sy ny finoana sns.
Ny teny hoe kristiana na kristianina dia avy amin'ny teny latina hoe Christianus na ny teny grika hoe Χριστιανός / Khristianos izay manondro an'ireo mpanaraka ny fampianaran'i Kristy. Ny teny hoe Kristy indray dia avy amin'ny teny latina hoe Christus na grika hoe Χριστός / Khristos izay fandikana ny teny hebreo hoe מָשִׁיחַ / Mashiah (nogasina ao amin'ny Baiboly malagasy hoe Mesia) izay midika hoe "voahosotra", izany hoe "voahosotr'Andriamanitra". Ara-bakiteny, ny Kristiana dia ireo "mpanaraka ny fampianaran'ilay Voahosotr'Andriamanitra".
Ny teny hebreo anondroana ny Kristiana dia נוצרים / Notzrim izay enti-milaza olona avy any Nazareta (hebreo: נָצְרַת / Natzrat) na mpomba an'ilay avy any Natzrat. Amin'ny Jiosy izany, ny Kristiana dia ireo olona manaraka an'ilay avy any Nazareta, fa tsy ireo mpanaraka an'ilay Voahosotra, satria aminy tsy i Jesosy no Mesia (Mashiah) na Kristy (Khristos).
Finoan'ny Kristiana[hanova | hanova ny fango]
Ny Kristiana dia manantena ny fanafahana vokatry ny fampianaran'i Jesoa Kristy, mino ny fahafatesany teny amin'ny hazo fijaliana (lakroa) sy ny fitsanganany amin'ny maty. Mino koa ny Kristiana fa izy no Mesia nampanantenaina hatry ny elabe ao amin'ny Baiboly hebreo (ny Testamenta Taloha) sady Zanak'Andriamanitra nirahin'ny Rainy hamonjy ny olombelona. Ny ankamaroan'ny Kristiana dia mino ny amin'ny Trinite, Andriamanitra Telo Izay Iray.
Hita tao amin'ny "https://mg.bywiki.com/w/index.php?title=Kristianina&oldid=816251"
Voaova farany tamin'ny 11 Jolay 2018 amin'ny 20:35 ity pejy ity.